The Ab Presents Nepal » यि भगवानको दर्शन गर्दै आज असार २६ गते, शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस,सोचेको काम बन्ने छ।
वि.सं.२०७७ साल असार २६ गते । शुक्रबार । ईश्वी सन् २०२० जुलाई १० तारिख । नेपाल संवत् ११४० ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लगानी गरि मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ । खनिज पदार्थ तथा पानीसँग सम्बन्धीत कामबाट भनेजस्तो आम्दानी हुनेछ । बैकसँग सम्बन्धीत कामबाट भनेजस्तो आम्दानी हुनेछ । प्रणय सम्बन्धमा नजिक हुने समय रहेकोछ भने जीवनसाथीको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । इच्छा, आकांक्षा तथा मनोकामना पुरा हुनेछन् ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) पुराना समस्याहरु समाधान गरि आम्दानीका स्रोत हरु बढाउन सकिनेछ । सत्रु परास्त हुनेछन् भने आफ्नो क्षेत्रमा वर्चस्व कायम राख्न सकिने तथा पहुच विस्तार गर्न सकिनेछ । बुवा वा बुवा सरहका मानिसबाट तपाईँको काममा सहयोग हुनेछ । परिवार तथा आफन्तको साथ पाइने हुनाले काम गर्न सहयोग पुग्नेछ । नोकरी तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतिहरुलाई चिर्दै गन्तब्यमा पुग्न सकिनेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) धार्मिक तथा आध्यात्मक क्षेत्रमा मन जानेछ भने धार्मिक क्षेत्र मन्दिर तिरको यात्रा गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा मन जानेछ भने खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा भनेजस्तो नतिजा हात लाग्नेछ । नयाँ काम पाउने तथा राम्रो स्थानमा स्थानान्तरण हुने योग रहेकोछ । पुराना काम सफलता पुर्वक सम्पन्न हुने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । सानो सानो प्रयत्न गर्दा पनि आम्दानी हुनेछ भने व्यापार व्यवसायमा सामान्य वद्धि हुनेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) खर्च बढ्नुका साथै आर्थिक संकटले सताउन सक्छ। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ला। समय र नियमलाई वेवास्ता गर्दा चुनौती आइलाग्नेछन्। दण्ड वा जरिवानामा परिने सम्भावना छ। छर–छिमेकमा पनि असमझदारी बढ्न सक्छ। तापनि, प्रतिस्पर्धाबाट सामान्य फाइदा उठ्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिने मौका छ। स्थानान्तरण वा टाढाको यात्रा सम्भावना छ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) तार्किक क्षमताबा बृद्धि भएर जानेछ भने वाणिमा थप निखारता आउने हुनाले नाम कमाउन सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने विपरित लिंग प्रतिको आकर्षण बढेर जानेछ । पढाइमा अरुभन्दा एक कदम बढी सफलता हात पार्न सकिनेछ ।औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउने तथा घाटा लाग्नेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) बन्द व्यापारबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ भने नयाँ उद्योगमा लगानी गर्ने अवसर आउनेछ । तपाईँको कुरा काट्ने तथा विरोध गर्नेहरु तपाईँकै प्रशंसा गर्न थाल्नेछन् । कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धिहरुलाई हराउँदै जित हात पार्न सकिनेछ । मुद्दा मामिला तथा न्यायिक निर्णयहरु तपाईँकै पक्षमा फैसला हुनेछन् । शरिर स्वास्थ्य रहने हुनाले राम्रा काम गरि दाम कमाउन सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा राम्रो नतिजाका साथ तपाईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) सन्तान बृद्धिको योग रहेकोछ धने सन्तानको प्रगति देख्न पाइनेछ । धर्म शाष्त्र तथा अध्यात्म ज्ञानमा बिषेश चासो बढ्नेछ । प्रेम गर्ने जोडिहरुले आफ्ना भावना खुलेरै साटासाट गर्नको लागि समयले साथ दिनेछ भने उपाहार पाइने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा बढुवा हुने योग रहेकोछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) माया प्रेममा अविश्वास सिर्जना हुनेछ भने घर परिवारमा आमासँग मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ । अन्य काममा व्यास्त हुँदा पढाइ लेखाइ कमजोर रहनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा समय लगानी गर्नेहरुले भनेजस्तो आम्दानी गर्न सक्नेछन् । समाजसेवामा नाम कमाउन अलि बढी नै संघर्ष गर्नु पर्नेछ । आफन्त तथा इष्टमित्रसँग टाढिएर लामो यात्रा गर्नुपर्दा मनमा बेचैन बढ्नेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जाने तथा मिल्ने साथीको सहयोगले कामहरु बन्नेछन् । रोकिएर बसेका कामहरु बन्नुको साथै विस्तारै नयाँ काम बन्नेछन् । पढाइ लेखाइमा सुधार गर्दै सफलताको नजिक पुग्न सकिनेछ । छिमेकिहरु माझ राम्रो कामगरि प्रशिद्धि कमाउन सकिनेछ । समाजिक सम्बन्धहरु सुदृढ भएर जानेछन् भने दाजुभाइ तथा बन्धुबान्धबको सहयोग पाइने हुनाले जोसिलो काम गर्ने जाँगर आउनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) आफन्त साथीभाइ तथा कुटुम्बबाट आउन सुखद समाचारले मन प्रशन्न हुनेछ । थोरै बोलेर आम्दानी गर्न सकिने समय रहेकोछ । माया प्रेमको डोरो कसिलो हुनेछ भने पति पत्नीबीच एक अर्कालाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । अध्ययनमा मन जाने हुनाले अरु भन्दा अग्र स्थानमा तपाईँको नाम आउनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) समयमा कामहरु सम्पन्न हुने तथा अरुको काम गरि नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनको क्षेत्रमा थोरै समय लगानी गर्दापनि सकारात्मक नतिजा हात लागि हुने ग्रहयोग रहेकोछ । माया प्रेममा आफ्नो मान्छेलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाउँदा मन प्रशन्न हुनेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) समयमा काम नबन्ने हुनाले आर्थिक पाटाहरु कमजोर रहनेछन् । लेनदेनको विवादले आत्म सम्मानमा दाग लाग्न सक्छ ख्याल गर्नुहोला । टाढाको यात्रा हुने भएपनि यात्राको क्रममा दुख पाईनेछ । विदेशमा बसेर काम गर्नेहरुका लागि वा विदेशी सामानको व्यापार गर्नेहरुका लागि समय राम्रो रहेकोछ । शरिरमा आलश्यता बढेर जानेछ भने भौतिक तथा विलाशी बस्तु हराउन सक्छ ख्याल गर्नुहोला ।
प्रकाशित मिति July 10, 2020
समाजको घिनलाग्दो पाटोः पैसा कमाउनकै लागि आमाकै मिलेमतोमा अबोध शिशुलाई मिल्काइयो सडकमा
ओली सग प्रचण्ड हारेकै हुन् त ? किन अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने मुडमा पुगे प्रचण्ड !
होटल रेस्टुरेन्ट बन्द गर्ने सरकारको निष्कर्ष सहि कि गलत?आफ्नो विचार राख्दै सेयर गरौ !
मन्त्री अर्यालले गरेका यी तिन कामले नेपालको शिर उचो बनायो !सम्मान सोरुप एक एक सेयर गरौ
आज जनै पूर्णिमा !शिव भगवानको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस् साउन १९ गते सोमबारको राशिफल र ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस लाभ हुने छ !
केपी-प्रचण्डले काम गर्ने मेसो पाएनन मैले मौका पाए ५ वर्षमा देश कायापलट गर्छु –नेता रामचन्द्र पौडेल
भर्खरै कोशी बाँध फुट्यो हेर्दाहेर्दै भारत डुब्न थाल्यो! अहिलेसम्मकै डेन्जर बाढी (हेर्नुहोस भिडियो)
उपसचिव सञ्जेललाई दुरब्यवहार गर्ने कर्मचारीहरूलाई मुद्दा,कस्तो कारबाही होला त ?
सारा नेपाली हेर्ने पर्ने प्रकाश सपुतको ‘बदला बरिलै’ गीति भिडियो युट्युबको ट्रेण्डिङ ३ मा (भिडियो सहित्)
मनकामना माताको दर्शन गर्दै आज साउन १८ गतेको राशिफल हेर्नुहोस र ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस !
पाथीभरा माताको दर्सन गर्दै आज साउन १६ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस सबै काम बन्ने छन !
यी भगवानको दर्शन गदै २०७७ साउन १५ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस दिन सुभ हुने छ !
बूढानिलकण्ठको दर्सन गर्दै आज बुधबार तपाईको राशिफल तपाईंको दिन कस्तो रहने छ हेर्नुहोस!
सुत्ने बेला यी भगवानको दर्सन गर्दै साउन १४ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस र ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस सपना राम्रो देख्नु हुने छ !
गणेश भगवानको दर्शन गर्दै आज साउन १३ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस र ॐ गणेशाय नमो लेखि सेयर गर्नुहोस
शिव भगवानको दर्शन गर्दै साउन १२ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस र ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस काम बन्ने छ !
मनकामना माताको दर्शन गर्दै आज साउन ११ गते आइतबारको राशिफल हेर्नुहोस र ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस सम्पूर्ण काम बन्ने छ !
आज नागपञ्चमी, यसरी पूजा गर्दा हुनेछ फाइदा !ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस